January 15, 2021 - Padaethar
မိတ်ဆွေများအားလုံးအတွက်ဆောင်ရန် ၊ ရှောင်ရန် ၊ ယတြာပြုရန် (၁)ပတ်စာ ဟောစာတမ်း
မိတ်ဆွေများအားလုံးအတွက်၂၀၂၁ ဇန်နဝါရီ (၁၆)ရက်မှ ၊ (၂၃)ရက်အတွင်း ဆောင်ရန် ၊ ရှောင်ရန် ၊ သတိပြုရန် ၊ ယတြာပြုရန် (၁)ပတ်စာ ဟောစာတမ်း ကျွန်ုပ်၏ ဣဌသဘောဆောင်သည့် ကောင်းသောဟောချက်များ မှန်ကန်၍ ၊ အနိဌသဘောဆောင်သည့် မကောင်းသောဟောချက်များ တက်တက်စင်အောင် လွဲမှားပါစေသတည်း။ နှင်းမှုန်ဖွေးဖွေး မြောက်လေသွေးသည့် စိတ်လှုပ်ရှားရင်ခုန်ဖွယ်ကောင်းလှသော ဆောင်းတွင်းကာလ ဇန်န၀ါရီလ၏ နေ့ရက်များ မိတ်ဆွေတို့၏ကောင်းကျိုးများကို အစဉ်လိုလားသော မင်းသိမ်းခိုင် – ရွှေရမ်းထူးလင်း ဆရာ မင်းသိမ်းခိုင် (ရွှေရမ်းထူးလင်း ) ၏ နေ့စဉ်ဗေဒင်ဟောစာတမ်းများကို နားဆင်လိုပါက တယ်လီနောဖုန်းနံပါတ် (၃၀၄၃) ကိုဖုန်းခေါ်ဆိုပါ ( တစ်ပတ်လျှက် ၃၁၅ ကျပ် ၊ ဉာဏ်ပူဇော်ခပါပြီး ) unicode မိတျဆှမြေားအားလုံးအတှကျ၂၀၂၁ ဇနျနဝါရီ (၁၆)ရကျမှ … Read more
ချစ်တယ်ဆိုတာက ကြိုက်တာနဲ့ လုံးဝ မတူတာကို ချစ်ဖူးသူတိုင်း သိကြပါတယ်။ ဘယ်လို စကားလုံးနဲ့ ပြောပြရမယ် မသိလောက်အောင် ကွာခြားပါတယ်။ ချစ်ဖူးသူတွေရဲ့ ခံစားချက်ကို မချစ်ဖူးတဲ့သူတွေကတော့ အထူးအဆန်း ဖြစ်နေကြမှာပါ။ ရည်းစားတွေ ဘယ်လောက်ထားထား ချစ်ဖူးချင်မှ ချစ်ဖူးကြတာပါ။ ချစ်ဖူးတဲ့သူဆိုရင်တော့ ဒီလို အခြေအနေတွေကို သိပြီး ကိုယ်ချင်းစာတတ်ကြပါတယ်။ (1) စိတ်လှုပ်ရှားတာ ချစ်မိသွားတဲ့ သူတစ်ယောက်က ကိုယ်ချစ်ရသူနဲ့ အရမ်း မရင်းနှီးသေးတဲ့ အချိန်မှာဆို အရမ်း စိတ်လှုပ်ရှားရပါတယ်။ စကားလုံးနဲ့ ဖော်ပြလို့ မရတဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားမှုက ပုံမှန် ဖြစ်တတ်တဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ လုံးဝ မတူပါဘူး။ ဘာမျှော်လင့်ထားလဲ မေးရင် ဘာမှ မျှော်လင့်ထားလို့ မဟုတ်ဘဲ ကိုယ့်ရှေ့မှာ သူရှိနေမှာဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့တင် စိတ်လှုပ်ရှားစေတာက အချစ်ကြောင့်ပါပဲ။ (2) … Read more
မနေ့ည ၈နာရီကျော်ကျော်လောက်က သင်္ကန်းခြုံထားတဲ့ ကိုရင်လေးက ချိုစိမ့်နဲ့ ပဲနံပြားပါဆယ်ဆွဲပြီး သင်္ချိုင်းကုန်းထဲ ဝင်ခိုင်းတယ်ဗျာ…
ဘယ်လောက်ပဲ ချစ်ပါတယ်ပြောပြော လက်မထပ်သင့်တဲ့ ယောက်ျား (၈) မျိုး
ဘယ်လောက်ပဲ ချစ်ပါတယ် ပြောပြောမယူသင့် လက်မထပ်သင့်တဲ့ ယောက်ျား (၈) မျိုး ဘယ်လောက်ပဲချစ်ပါတယ်ပြောပြော မယူသင့် လက်မထပ်သင့်တဲ့ ယောက်ျား ၈ မျိုးကို ပြောပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီလိုယောက်ျားမျိုးတွေကို လက်ထပ်ဖို့ မသင်ပပါဘူးနော် … ( ၁ ) လင်မွဲ ဘယ်လောက်ပဲ ချစ်ချစ် စီးပွားရေး အသိတရား မရှိဘူး ဆိုရင် အိမ်ထောင်ရေးဟာ ရေမရှိတဲ့ အိုင်မှာ နေရတဲ့ငါးလိုပဲ ပူလောင်ခြောက်သွေ့ လွန်းပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် မွဲတဲ့ ယောက်ျား မယူလေနဲ့ …။ ( ၂ )လင်နာ မင်္ဂလာဦးညက စလို့ ဖြစ်လိုက်တဲ့ ရောဂါကြီးသေး ပေါင်းစုံ၊ ပိုးမွေးသလို မွေးနေရမယ့် ကိုချူချာ၊ ကုလိုက်ရတဲ့ဆေး၊ ရှိသမျှ အကုန်ပြောင်။ အကျိုးစီးပွား တိုးတက်ရာ … Read more
သေလောက်အောင်ချစ်လည်း ဒီလုပ်ရပ်မျိုးလုပ်ရင်တော့ မိန်းမတွေ(လုံးဝ) ခွင့်မလွှတ်တတ်ကျဘူး
အခဈြကွီးတဲ့နရောမှာ မိနျးကလေးတှကေ နာမညျကြျောကွပါတယျ။ ဒီလို အခဈြကွီးပမေယျ့လညျး မိနျးကလေးတှမှော ခဈြသူကို ဘယျလိုမှ ခှငျ့မလှတျနိုငျတဲ့အရာတှလေညျး ရှိပါတယျ။ အရာအားလုံးကို ခှငျ့လှတျနိုငျရငျတောငျ လုံးဝ ခှငျ့လှတျပေးလို့ မရတဲ့ အရာတှကေတော့…. (၁) သစ်စာဖောကျတာ မိနျးကလေးတှရေဲ့ အမုနျးဆုံးအခကျြကတော့ သစ်စာဖောကျခွငျးပဲ ဖွဈပါတယျ။ ကိုယျနဲ့ လူသိရှငျကွားတှဲနလေကျြနဲ့ ကိုယျ့အပျေါ သစ်စာဖောကျသှားတာကို အမုနျးဆုံး ဖွဈပါတယျ။ စိတျအလိုလိုကျပွီး ဖွဈသှားတာ ဖွဈစေ၊ ခတ်ေတဖွဈပွီး ပွီးသှားတာ ဖွဈစေ မိနျးကလေးတှကေ အရမျးမုနျးပါတယျ။ (၂) အပွိုငျထားတာ အခဈြဆိုတာ ကိုယျ့အပျေါပဲ အာရုံစိုကျပွီး ဂရုတစိုကျခဈြကွခွငျးလို့ မိနျးကလေးတှကေ နားလညျထားကွပါတယျ။ ဒါကို နောကျတဈယောကျပါ ထားပွီး ဟိုကိုလညျး မစှနျ့လှတျနျိုငျ ဒီလိုလညျး လကျမလှတျနိုငျဆိုတဲ့ မပွတျမသား လုပျတတျတဲ့ ကောငျလေးတှရေဲ့ လုပျရပျတှကေို … Read more
အသားလှုပျ နိမိတျအဟောမြား လကျဝဲ လကျယာမဟုတျသော အသားလှုပျနိမိတျအဟော ၁။ ကြောကုနျးလှုပျမူ အဝတျရမညျ။ ၂။ ကိုယျလှုပျမူ မယားနှငျ့အတူ စကားဆိုရမညျ။ ၃။ ခါးလှုပျမူ ဥစ်စာပြောကျမညျ။ ၄။ ခကျြလှုပျမူ နှဈလိုဖှယျသော ဥစ်စာ ရမညျ။ ၅။ထိပျလှုပျမူ မငျးပူဇျောခံရမညျ။ ၆။ နှာခေါငျးလှုပျမူ ခဈြသူမြားမညျ။ ၇။ နှလုံးသားလှုပျမူ ခငျပှနျးကောငျးတဈယောကျ ဥစ်စာပေးလာမညျ။ ၈။ မေးဖြားလှုပျမူ အခငျြးမြားမညျ။ ၉။ လညျပငျးလှုပျမူ တနျဆာဆငျရမညျ ၁၀။ အထကျနှုတျခနျးလှုပျမူ ရနျဖွဈမညျ။ ၁၁။ အောကျနှုတျခနျးလှုပျမူ အဝေးစကားပွောကွားရမညျ။ ၁၂။ အင်ျဂါဇာတျလှုပျမူ မယားနှငျ့စကားမြားမညျ။ ဥစ်စာရမညျ။ ၁၃။ ဦးခေါငျးလှုပျမူ ကြှနျဖွဈမညျ။ ၁၄။ ဦးရလှေုပျမူ နာဖြားမညျ။ လကျယာ အသားလှုပျနိမိတျအဟော ၁။ လကျယာ … Read more
နောက်ကနေ မရီး မရီး နဲ့ လိုက်ခေါ်နေလို့ လှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့ အခါ….
ဒီအကြောင်းအရာလေးကို ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့ Daw Su Lay အကောင့်ပိုင်ရှင်မှ တင်ပြထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ လောကမှာ ဒီလို စိတ်ထားလေး ရိုးဖြောင့်တဲ့ ကလေးတွေ လေးစားဖွယ်ရာ ရှိနေသေးတယ်ဆိုတာ လေး အများသိအောင် ဒီကလေးကို လေးစား ဂုဏ်ပြုလိုသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် တစ်ဆင့် ပြန်လည် မျှဝေပေးလိုက်ပါသည်။ 73 လမ်း 37 ဒေါင့် ဆိုင်ကယ်လေးရပ်ပီး အထဲဝင်သွားတာ ကိုယ့်အနောက်ကနေ မရီး မရီးနဲ့ခေါ်နေလို့ လှည့်ကြည့်မကြားတစ်ကြားနဲ့ဆိုတော့ ကိုယ်လဲ ကလေးက မုန့်ဖိုးလေးတောင်းတယ်ထင်နာပေါ့ ပြီးတော့မှ ဆိုင်ကယ်ထဲမယ် မရီးဖုန်းကျန်ခဲ့တယ်တဲ့ ကိုယ်လဲတုံလှုပ်ပီး ဝမ်းသာသွားတယ်… တော်သေးတာပေါ့ ကျေးဇူးပါ မောင်လေးရယ် မရီးဖုန်းလေး မင်းနဲ့သာမတွေ့ရင် လိုချင်တဲ့သူတွေလက်ထဲရောက်နေပီ တစ်ကယ်ဆိုရင် ဒီဖုန်းကို သူယူလို့ရတာပဲ ရိုးသားလိုက်တဲ့ကလေး ဒီပစ္စည်းကို သူ မမက်မောဘူးတဲ့ … Read more
မိမိမွေးသက္ကရာဇ် အရ ထီပေါက်တတ် သည့်လ
အောကျတှငျ Unicode နှငျ့ ဖတျရှု့နိုငျပါသညျ ပထမဆုံးသိထားရမှာ တစ်ခုကတော့ ထီမထိုးသူတွင် ထီပေါက်ကိန်းမရှိဆိုတာပါပဲ။ ဒုတိယသိထားရမှာကတော့ မိမိရဲ့သက်ရောက် ကံအကောင်းခွင် နဲ့ ကြုံလို့လည်း ဘယ်လမှာ မဆိုထီပေါက်နိုင်တယ် ဆိုတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့်ယခု နည်းကတော့ ဆရာတို့နှစ်ရှည် လများ သုတေသန ပြု ရှာဖွေတွေ့ ရှိထားတဲ့ မိမိတို့ရဲ့မြန်မာလိုမွေးသက္ကရာဇ်ပေါ်မူတည် ပြီး ထီဆုမဲပေါက်တတ်တဲ့ကံထူးတတ်တဲ့ လတွေကို ခုနှစ်ရက်သားသမီးများအတွက် စေတနာကောင်းဖြင့် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ။ မိမိမြန်မာမွေးသက္ကရာ ဇ်ကိုတည် (၇)ဖြင့်စားပါ။ ဥပမာ။ (၁၃၄၅)ခုဖွားဆိုပါတော့ (၇)ဖြင့်စားရင် (၁)ကြွင်းပါတယ်။ (၁၃၇၄)ခုဖွားဆိုရင်(၇)နဲ့စားတော့(၂) ကြွင်း၊ (၁၃၄၁)ဆိုလျှင် (၇)ဖြင့်စားတော့(၄)ကြွင်းပေါ့။ အဲ့ဒီလိုအကြွင်းသိပြီဆိုရင်ရပါပြီ။ (၁)ကြွင်းဇာတာရှင်တွေ (နယုန်)လမှာထီထိုးပါ။ (၂)ကြွင်းဇာတာရှင်တွေ(ဝါဆို)လမှာထီထိုးပါ။ (၃)ကြွင်းဇာတာရှင်တွေ(ဝါခေါင်)လမှာထိုးပါ။ (၄)ကြွင်းဇာတာရှင်တွေ(တော်သလင်း)လမှာထီ ထိုးပါ။ (၅)ကြွင်းဇာတာရှင်တွေ(သီတင်းကျွတ်)လမှာ ထီထိုးပါ။ (၆)ကြွင်းဇာတာရှင်တွေ(တန်ခူး)လမှာထီထိုးပါ။ (ဝ)ကြွင်းဇာတာရှင်တွေ(ကဆုန်)လမှာထီထိုးပါ။ စေတနာမှန်လျှင်ကံကောင်းမည် … Read more
2021ခုအတွက် စနေသားသမီးများ တစ်နှစ်စာဟောစာတမ်း
2021ခုအတွက်စနေသားသမီးများ တစ်နှစ်စာဟောစာတမ်း စနေသားသမီးတို့သည် 2021 ခုနှစ်တွင်ဘဝတစ်ဆစ်ချိုးအပြောင်းအလဲဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ မူလဇာတာအရ ကံကောင်းချိန်ကျရောက်နေတဲ့သူများက သူမတူအောင် တိုးတတ်သွားနိုင်ပြီး..မူလဇာတာအရလဲ ဒီနှစ်မှာကံညံ့နေသူဖြစ်မယ်ဆိုရင် ဘဝပျက်လောက်သည်အထိ ကံဆိုးသွားတတ်ပါတယ်။ ဒီနှစ် မမျှော်လင့်ထားတဲ့ အပြောင်းအလဲတွေဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ နေရာသစ်၊ ဝန်းကျင်သစ်များသို့ ပြောင်းရွှေ့လုပ်ကိုင်ရ တတ်သည်။ သူတစ်ပါးအတွက် အကျိုးမပေးလို့ပစ်ထားတဲ့အလုပ်များမိမိကပြန်လည်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် အောင်မြင် ခြင်း ကံကို ရ တတ်သည်။ သူများတွေကအရှုံးပေါ်လို့ ရောင်းချင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဝယ်ယူလုပ်ကိုင်တာမျိုးက မထင် မှတ်လောက်အောင် တိုးတတ်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ဘာသာအလုပ်သစ်၊စီးပွားသစ်စမယ်ဆိုရင်တော့ ထင်သလောက် မအောင်မြင်ပါဘူး။ ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းများ၊ဖျော်ရည်ယမကာများ၊တံငါလုပ်ငန်း၊မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း၊ စားသောက်ကုန် ထုတ် လုပ်မှု လုပ်ငန်း၊ အဝတ်အထည်နှင့် ဖန်စီလုပ်ငန်းများ၊ စက်ချုပ်ပစ္စည်းများ ရောင်းဝယ်ခြင်းများ အကျိုးပေး မည်။ မိမိရင်းနှီး မြှုတ်နှံမှုများသလောက် အကျိုးအမြတ်ဖြစ်ထွန်းမှု အားနည်းနေတတ်သည်။ မမျှော်လင့်ဘဲ ဘာသာရေးကိစ္စ၊ အလှူအတန်းကိစ္စများကို ထူးခြားစွာ အောင်မြင်လာပါလိမ့်မည်။ဘာသာရေးကိုမေ့ပြီး အတ္တသိပ်ကြီးတဲ့ … Read more